Site na egwurugwu - ihe osise na-ejikọ àkwà mmiri
25 nwere ike 2013
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 25. Mee 2013
Agtụgharị uche bụ ihe itule iji egwurugwu.
"Site na egwurugwu"
Egwurugwu a na-enweghị ngwụcha nke egwurugwu na-enwu na Saturday Saturday site na obodo ukwu Düsseldorf n'elu obodo ahụ.
Mgbasa ozi 'sitere na egwurugwu' PixelHELPER na-eche maka nnagide ọzọ na-emegide ịkpọasị.
Ngwurugwu na-egosipụta olileanya & izu oke. Mgbe ọ bụla ndị mmadụ hụrụ egwurugwu, otu ihe doro anya: ọchịchịrị na mmiri ozuzo anaghị edobe okwu ikpeazu.
Ihe oru nlere bu oria "Site na egwurugwu" nke Oliver Bienkowski bu oru na - aga n’ihu ebe a na - agbanwe akwa, ulo na ihe owuwu obodo amara dika egwuru mmiri egwurugwu. Ruo ugbu a, a na-emezigharị akwa Karl Branner na Kassel na mgbakwunye ọdụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri mgbasa ozi Düsseldorf. Ihe oru a kewara ndi mmadu na Documenta ma mepee otutu ndi nleta nke mba di iche-iche. Ọnụ ụzọ Brandenburg mekwara ka ọ bụrụ egwurugwu maka Ememe Ìhè. Kasseler a ma ama ama kasiler Bergpark Kaskaden, akụkụ nke UNESCO World Heritage Site, enwetala egwurugwu. Site na nke a, onye na-ese ihe na-agba mbọ maka nnabata ọzọ & megide ịkpọasị.
Site na egwurugwu - ihe osise na-ejikọ àkwà mmiri Mee 6th, 2020Oliver Bienkowski
tagged: Ịhụnanya amaghi oke, Akuku Orlando